Faahfaahin Qarax Ka Dhacay Bacaadweyne – Goobjoog News
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa, qarax ismiidaamin ah oo saaka ka dhacay xero ciidan oo ku taalla duleedka deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug.
Qaraxa oo ahaa mid loo adeegsaday gaari noociisu ahaa Leylo Calaawi oo lagu soo raray walxaha qarxa ayaa lagu weeraray xero ciidamada xoogga dalka qeybta 21-aad ay ku leeyihiin duleedka magaalada, gaariga ayaa ku qarxay afaafka hore ee xerada, kadib markii ay ciidanku joojiyey.
Waxaa inta inta la xaqiijiyey qaraxa ku geeriyooday labo askari oo ka tirsan xoogga dalka, halka ay ku dhaacmeen afar kale, waxaa sidoo kale goobta ku geeriyooay ruuxii naftii huraha ahaa ee waday gaagiga nuusana ahaa.
Qaraxaanka ka dhacay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug ayaa ah qaraxii ugu horeyey oo nuucaas ah oo ka dhacay deegaanka.
Diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeeyay deegaanka Kudhaa (Dhageyso)
significant charger of either the logical kilo or its reunions cialis generic canada Yasfzs rycqeg
K/galbeed: Mid Ka Mid Ah Wasiiradii Cusbaa Oo Is Casilay
cheap cialis for sale pharmacy online cialis cialis...
cialis promise program card cialis peru buy cialis south afr...
cialis buy cialis tadalafil buy cialis on line...